Otu esi enweta CCNP Wireless Certified Professional - ITS Tech School
Kedu ikikere CCNP Wireless?
Nzọụkwụ 1: Lee anya na ị ruru eru inweta asambodo ahụ
Nzọụkwụ 2: Ịchọpụta asambodo ahụ
Nzọụkwụ 3: Imelite asambodo ahụ
Cisco awade ọtụtụ ọkachamara larịị certifications dị ka CCNA na CCNP. ebe ọ bụ na CCNP bụ ọkwa dị elu karịa nke CCNA, ọ bụ ihe mgbagwoju anya ma rịọ ka a mara ọkwa na ịgbalịsi ike. Ọ bụrụ na e nwere ihe omume nke ntinye ikuku wireless, a na-eji usoro na netwọk arụmọrụ arụ ọrụ iji rụpụta ụlọ ọrụ maka ndị ọkachamara izute nkwarụ netwọk. Na mmụta mụbara site na asambodo ahụ, ndị ọkachamara nwere ike ime ka nkọwa nke mkpa azụmahịa dị na nhazi ọrụ. Nye anyị ugbu a ohere iji hụ na CCNP Wireless certification zuru ezu.
The Cisco Certified Network Professional Wireless certification concentrates on wireless networking innovation utilizing Cisco items. Ọ maara nke ọma na 2009 na-eburu n'uche ihe ndị dị mkpa nke azụmahịa ahụ. Asambodo ahụ na-ekpuchi iziga, ime atụmatụ, ịchekwa ma nyochaa netwọk ikuku nke Cisco.
CCNP Ikuku gbasaa isiokwu dị ka ịduzi ọmụmụ ihe ebe, ịchọta ihe ndị dị mkpa n'ọdịnihu, ikuku netwọk ikuku, ịchekwa ntọala LAN wireless na ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-adịghị mma. Ndị ọkachamara na-enweta asambodo a na-ahụ n'ụwa niile dị ka ndị na-etinye aka na ngwaọrụ Cisco. Nke a bụ akwụkwọ kachasị mma maka ndị ọkachamara na-achọ ọrụ ndị ka mma na ụgwọ dị elu. E nyere n'okpuru ebe a bụ ụzọ isi nweta asambodo ahụ.
Lee kwa:Akaụntụ CCNA - Nduzi zuru ezu
Ndị ọkachamara n'Ịntanet netwọk dị ka ndị na-ahụ maka netwọk, ndị na-ahụ maka netwọk na ndị ọkachamara na netwọk nwere ike ịme asambodo ahụ iji mee ka ha ghọta na nghọta ha. Ndị mmadụ na-achọ ọnọdụ ndị a nwere ike ịhọrọ nke a iji mee ka ha mara ọkwa nke ọma maka oghere ndị metụtara ya maka ọrụ. A na-enyocha na ọrụ ga-ejupụta 20% n'etiti afọ 2008 na 2018. Ọnụ ọgụgụ nke mmepe azụmahịa bụ ịdabere na 30 na-eme ka ọ baa uru nye ndị ọkachamara nọ n'ọhịa a. Ọhụụ na-ahụ ụda oghere maka ọrụ na-abịa ntụziaka ha ozugbo ha nwetara akwụkwọ asambodo ahụ.
Nwoke nke kwesiri inweta ya kwesiri ka enwere CCNA Wireless or CCIE certification. Nke a pụtara ị nweta nyocha nke ikuku nke CCNP, ọ ga-ebu ụzọ buru Cisco Certified Network Associate Wireless or the Cisco Certified Network Associate Wireless or the Cisco Certified Network Associate Wireless. Cisco Akwụkwọ akaebe ọkachamara na Internetwork na egwu ọ bụla.
Enwere ule anọ maka nyocha nke ikuku. Ndị a bụ 642-731 CUWSS, 642-741 IUWVN, 642-746 IUWMS na 642-736 IAUWS. Ihe nlere nke ọ bụla nwere 50 ka adreesị 60 ga-agwụ na otu elekere na ọkara. Maka ule ọ bụla, enwere ọzụzụ nke ụbọchị 5. Ihe ọmụmụ ndị a na-akwadebe onye na-akwado ya iji melite netwọk ikuku, tinyekwa ihe dị iche iche dịka Voice n'elu Wireless Local Area Administrations, uru ndị bara uru ma chebe netwọk megide ihe ize ndụ ndị nwere ike iche.
Onye ọ bụla ọkachamara ọkachamara nyere Cisco ọ dị ezigbo mkpa ruo oge nke nanị afọ atọ. Mgbe oge a gasịrị, asambodo ahụ na-agbagha na onye na-ejide aka n'enyeghị ya aka erughị eru maka uru ndị ọkachamara. O kwesịrị itinye akwụkwọ maka nyochaa iji nọgide na-ekele ha. O nwere nhọrọ anọ iji chọgharịa. Ọ ghaghị ịgafe nyocha ọ bụla ọkachamara tupu asambodo ahụ akwụsị ma ọ bụ na ọ ga-agafe ọ bụla n'ime ule CCIE ugbu a. Nhọrọ nke atọ bụ ịnyefe ugbu a Cisco Certified Design Expert (CCDE) dere ma ọ bụ ala na nyocha nke ụwa. Nhọrọ ikpeazụ bụ ịhapụ nzukọ nzukọ na ihe nyocha maka ihe nyocha nke Cisco Certified Architect (CCAr) nke na-eme ka ọ kwadoro ya maka ọkwa niile dị ala.
CCNP Ikuku bụ akwụkwọ nrịba ka ukwuu nke na-achọ ka ndị na-asọ mpi na-ewere nyocha ahụ kwesịrị inwe nnukwu isi na mpaghara. Nke a na-agụnye ma echiche dị iche iche na ịrụ ọrụ nke ọma na eziokwu ahụ bụ na ozugbo a gbaara ha àmà, ha ga-arụ ọrụ na ọnọdụ netwọk ziri ezi. Nke a ga-anwale ihe ọ bụla aka ha nwere site na asambodo ahụ.
Lee kwa:Kedu ihe ụlọ ọrụ na-achọ ndị ọkachamara na nchekwa na Admins CEH akwụkwọ?